6W 384 Leds / M 24V 5mm White COB LED Strip Light ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ - Light On
Home > Products > LED Strip Light > White COB Strip LED > 6W 384 Leds / M 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
6W 384 Leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip light သည်အလွန်ပါးလွှာသော 5mm PCB board ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ချစ်ပ်များကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မကြုံစဖူးနီးကပ်စေပြီးစူပါတောင်မှအလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြစ်စေသည်။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အများကြီးတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် 6W 384 leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED strip light
၂။ ကုန်ပစ္စည်းပရမီမီတာ (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) ၆W 384 leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED အချွတ်အလင်းရောင်
Product name: 6W 384 leds/m 24V 5mm white COB LED strip light အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP20, IP65, IP67
မော်ဒယ်နံပါတ်။: operating Temp .: -25°C~ +45°C
FPC အကျယ်: ၅ မီလီမီတာ Storage Temp.: -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အလင်းအရင်းအမြစ်: COB LED စံအလျား ၅ မီတာ
COB အရေအတွက်: 384 pcs/m ခုတ်နိုင်သောအရှည်
LED color: အဖြူရောင် Certification: အီး, RoHS, FCC က
အရောင် Temp .: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K အာမခံချက် - ၃ နှစ်
CRI: â 90, 90 Life time: နာရီ 50000
SDCM ≤5 ထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:5meters/reel/bag
Beam ထောင့် 180 ° Packing info.: 50 reels/box,
Luminous Flux: သေတ္တာအရွယ်အစား: 500*356*206mm
Working voltage: 24V တစ်ဘူးလျှင် G.W ၆.၅ ကီလိုဂရမ် (IP20)
ပါဝါ: 6W/m Application: corner decoration, contour lighting, KTV, shopping mall, cabinet etc.
6W 384 Leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip light ကို DC24V power ဖြင့်စွမ်းအားပေးထားပြီး၎င်းတွင်အောက်ပါလက္ခဏာများပါဝင်သည်။
4. ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး 6W 384 leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED strip strip
5.W 384 Leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light ၏တာ ၀ န်၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ 6W 384 Leds / m 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကြောင့်ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိစေရန်မိုးသည်းထန်စွာရွံ့သောပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ အသေးစားသို့မဟုတ်နမူနာအမှာစာများကိုအမြန်ဆုံး UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် DHL မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ပင်လယ်ကုန်တင်ပိုပိုသည်။
hot Tags:: 6W 384 Leds/M 24V 5mm White COB LED Strip Light, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality